Zvichida iwe une allergies. Pamwe wawana imwe yakawandisa yekuzivisa nezve pamusoro pehunhu hwemhepo munzvimbo yako. Pamwe wakazvinzwa zvinogona kubatsira kudzivirira kupararira kwe COVID-19. Chero zvingave chikonzero chako, urikufunga kuwana mhepomunatsi, asi zvakadzika pasi, haugone kubatsira asi kushamisika: Ita mhepo vanonatsabasa? Ivo vanovimbisa kusefa guruva, mukume, utsi, kunyangwe utachiona, asi vanonyatso kuendesa pane izvo, kana ivo vangori vakawandisa mafani?
Mhepo yekunatsa yakagadzirirwa kugadzirisa mhando yemhepo mune imwechete kamuri. EPA uye vanachiremba vazhinji vanobvumirana kuti vanonatsa mweya vanobatsira. Kunyanya kana kusvibiswa kwekunze kukwirira, kana kana kuri kutonhora kwazvo kukanda kuvhura windows uye kupinza matani emhepo nyowani.
"Madonhwe ehutachiona, seSarsCoV2 nefuruu, izvi zvinogona kuramba zvakamira mumhepo kwemaawa, saka firita yemhepo haigone kukuvadza, asi rangarira madonhwe acho anogona kumhara pamusoro uye kugara ipapo zvakare," anotsanangura Dr. Elliott. "Chinatsa mweya hachifanirwe kutsiva chifukidzo chekupfeka, kugeza mawoko, kuzviparadzanisa nevamwe, kusagovana zvigadzirwa zvemunhu." Sekutaura kweCDC, funga kufefetedza chikamu che "nzira yakatsemuka" yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Saka ndedzipi mhando dzekuchenesa mweya dzatinofanira kusarudza nekudzivirira?
Dzimwe mhando dze mweya unonatsa, kunyanya maozone emagetsi anogadzira ozone panguva yekuchenesa. Ozone isina gasi, isina chepfu uye isina kugadzikana gasi ine matatu maatomu eoksijeni mune yega yega mamorekuru ayo. Iyo gasi inoitika zvakasarudzika mudenga rekumusoro, asi zvakare chiri chinhu chakajairika chehunhu hwakagadzirwa nevanhu. Ozone inogadzira mweya yekuchenesa mweya nemaune inoburitsa ozone gasi senzira yekubvisa mabhakitiriya nemakemikari mumhepo. ICalifornia Environmental Protection Agency inoti ozone exposure inokuvadza kumasero mumapapu nemumhepo. Mhedzisiro mhedzisiro yekuratidzwa kune gasi inogona kusanganisira kupfupika kwemweya wekufema, kukosora uye kuomarara kwechifuva. Varwere vane asthma kana mamwe mamiriro ehutano aripo vanogona kuona kuwedzera zviratidzo zveaya mamiriro semhedzisiro yeozone kuratidzwa.
Zviri nani here kusarudza yekuchenesa mweya iyo inoshandisa fibrous media media firita?
Chaizvoizvo, yakawanda yekuchenesa inoshandisa firita-kana musanganiswa wefirita uye UV mwenje-kubvisa tsvina uye zvinosvibisa kubva mumhepo. Izvo zvakagadzirirwa kugadzirisa mhando yemhepo mune imwechete kamuri. Nekudaro, vazhinji vanonatsa mweya vanovimba nekushandiswa kweanogona kuraswa, mafirita anotsiviwa, zvinoreva kuti unofanirwa kushandisa chero pakati pe $ 30 ne $ 200 gore rega pane mafirita matsva. Kana iwe ukasachinja iyo yekuchenesa firita nguva nenguva, iyo firita haishande zvakaringana. Zvekuchenesa mamodheru ayo anoshandisa zvakare zvinoshandiswa midziyo kana mahwendefa kutora utachiona, iwe unofanirwa kupota uchichenesa zvinhu izvi. Ipo ichichengetedza iyi yekupedzisira mhando yekuchenesa haina kudhura, iri zvakare rakanyanya basa rakanyanya. Kusachinja uye kuchenesa mafirita nenguva kunogona kuwedzera kunaka kwemweya mumba mako kana muhofisi. Yakachena HEPA yekuchenesa mweya zvakare haibvise hwema, makemikari, kana gasi. Izvi zvinhu zvidiki pane maburi 0.3-micron mune HEPA firita. Naizvozvo chairo HEPA yekuchenesa mweya ine imwe nhanho yakagadziriswa kabhoni-yakavakirwa zvinhu zvekutora hwema nemakemikari ayo asingazobatwe neiyo HEPA element pachayo.
Pane here nyanzvi-yegiredhi mweya yekuchenesa, iyo isingashandise firita uye ichiri kuendesa yakanaka yekuchenesa mweya mhedzisiro?
Mazuva ese, mabhizinesi anovimba neAirwoods kubatsira kuchengetedza mweya wepamukati kune vatengi vavo nevashandi. Airwoods Inotora yekurapa giredhi disinfection yekuchenesa tekinoroji. Kubudirira kubvisa kunhuhwirira, utsi, huni, mukume, guruva, maVOC, mabhakitiriya, hutachiona, nezvimwewo Inokodzera imba, hofisi, chikoro nenzvimbo dzekurapa.
Yepamberi Yekutanga Molecular Kuputsa Tekinoroji:
Kana mweya wakasvibiswa ukapinda muchikamu chepakati cheiyo mamorekuru kutyora tekinoroji chinonatsa, maoni ane simba ane simba anogadzirwa neakanyanya simba mukati mechinhu chepakati chinokanganisa mamorekuru zvisungo zvezvinhu zvinosvibisa, zvichikonzera zvisungo zveCC neC CH izvo zvinoumba zvisungo zvema molecular ezvekukuvadza zvakanyanya magasi uye magasi kutsemuka, saka ma microorganisms anokuvadza anourawa sezvo DNA yavo ichiparadzwa uye magasi anokuvadza akadai seFormaldehyde (HCHO) neBenzene (C6H6) akatsemurwa kuita CO2 neH2O. Uraya hutachiona uye hutachiona nehutachiona hutachiona kupfuura 99%. Zvinonyatso kuora nicotine uye kukanganisa hunhu hwehu kusvibisa.
Iko kudiwa kweAirwoods Mhepo yekuchenesa mubhizinesi haina kumbove yakakura. Yedumunatsi inoparadza huwandu hwakawanda kwazvo hwezvinhu zvinosvibisa, zvinosanganisira mavhairasi, bhakitiriya, chakuvhuvhu, allergener, uye makemikari. Nedu epamberi mamorekuru kutyora tekinoroji, isu takagadzirira kubata yanhasi epamba mweya dambudziko. Dzvanya chinongedzo pazasi kuti utore iyo katarogu. Inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo rwechigadzirwa.
Dhawunirodha chigadzirwa katalog